भरतपुर प्रयोगशालाले परीक्षणको रिपोर्ट मोवाइलमा दिने - खबरदार न्युज
September 8, 2020 January 9, 2021 AdministerLeaveaComment on भरतपुर प्रयोगशालाले परीक्षणको रिपोर्ट मोवाइलमा दिने
१७ भदौ, चितवन । चितवनको भरतपुर अस्पताल मातहत रहेको भरतपुर कोभिड १९ प्रयोशालाले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट मोवाइलमै पठाउने भएको छ । कोभिड प्रयोगशाला प्रमुख डा. नितु अधिकारीले त्यसका लागि प्रयोशालामा सफट्वेयर जडान गरिसकिएको बताइन् । ‘सम्भवतः भोलिदेखि कोरोना परीक्षणको नमूना दिएर रिपोर्ट पर्खिरहेकाहरु लाई मोवाइलमै म्यासेज पठाउने कामको सुरुवात हुन्छ’ डा. अधिकारीले भनिन्, ‘त्यसका लागि नेपाल टेलिकमसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने काम मात्रै बाँकी छ ।’ अहिलेसम्म रिपोर्ट पोजेटिभ आएका संक्रमितहरुलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर र नेगेटिभ आएकाहरुलाई अस्पतालको फेसबुक पेजमार्फत जानकारी दिने गरिएको थियो । कतिपय व्यक्ति रिपोर्टबारे जानकारी लिन प्रयोगशालामा नै पुग्ने गरेका थिए । पोजेटिभको रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिको मोवाइलमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने बारेमा अस्पताल प्रशासनले निर्णय लिने प्रयोगशाला प्रमुख डा. अधिकारीले बताइन् । नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरुको भने मोवाइलमा जानकारी पुग्छ । नेगेटिभ वा पोजेटिभ रिपोर्ट आएकाहरुको मोवाइलमा एसएमएस जाने आइडी र पासपोर्ट, अस्पतालको वेभसाइटमा रहेको कोभिड रिपोर्टसम्बन्धी लिंकमा हालेर रिपोर्ट प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रयोशशाला प्रमुख डा. नितु अधिकारीले नमूना दिने सम्बन्धित व्यक्तिले नमूना दिँदा आफ्नो सही विवरण, नाम, ठेगना, उमेर र मोवाइल नम्बर दिन अनुरोध गरिन् । ‘कसैले झुटो विवरण टिपाए रिपोर्ट पनि त्यस्तैं आउँछ, सफ्टवेयरमा इन्ट्री भएपछि केही गर्न सकिदैन’ डा. अधिकारीले भनिन् । अहिलेसम्म म्यानुअल तरिकाबाट चलेको प्रयोगशालालाई स्वचालित प्रणालीबाट चलाउने मेसिनको माग भइरहेको छ । चैत्र २१ गते स्थापना भएको प्रयोशागालमा हालसम्म २० हजार ३ सय १० बटा नमूना परीक्षण गरिएको छ । चितवनसहित विभिन्न १५ जिल्लाका नमूना परीक्षणका लागि भरतपुर आउने गरेका छन् ।
उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप एक साता लम्ब्याइएको छ । गृह मन्त्रायलसँग छलफल गरेपछि उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका हुन् । तर, यसपटक केही सेवालाई सञ्चालनका लागि छुट दिइएको छ । एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार टेकअवे, होम डेलिभरी र भन्सार पास भएका निर्माण सामग्रीलाई सञ्चालनका लागि छुट दिइएको छ । औषधि, खाद्यवस्तु र अत्यावश्यकीय वस्तु खरिदमा यसअघि पनि रोक लगाइएको थिएन । यद्यपि, बाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने भनिएको थियो । नियमित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कार्यालय जाने कर्मचारी विहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म र बेलुका ३ देखि साढे ५ बजेसम्म आउजाउ गर्न सक्ने भनिएको थियो । होटल, रेष्टुरेन्ट, फुटपाथ पसल अझै बन्द हुनेछन् । बैंक लगायतका निकायले न्यूनतम कर्मचारी राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सेवा दिन सक्नेछन् । उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि तीनै जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३ भदौदेखि लागू हुने गरी एक साता निषेधाज्ञा लगाउने आदेश जारी गरेका थिए । तर, १० भदौमा पुनः ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको थियो । जुन बुधबार मध्यरातिबाट सकिँदैछ ।